Maaddaama warshadaha dalxiisku ay ku wajahan yihiin isbeddel aasaasi ah, caymisyaashu waxay u diyaargaroobayaan dusha sare ee baahida
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Boostada martida » Maaddaama warshadaha dalxiisku ay ku wajahan yihiin isbeddel aasaasi ah, caymisyaashu waxay u diyaargaroobayaan dusha sare ee baahida
isha sawirka: https://www.pexels.com/photo/shallow-focus-photo-of-world-globe-1098515/
Warshadaha dalxiisku waa ay la qabsadeen oo is beddeleen intii uu socday cudurka faafa ee coronavirus mana ahan wax yar marka loo eego in aan ku soo jirnay waqtiyo adag.
Si loo suurtageliyo dalxiiska mar kale, waxaa lagama maarmaan ah in la hubiyo in dadku ay dareemaan ammaan inta ay khusayso safarka.
Halkii laga jari lahaa miisaaniyada si loo ilaaliyo lacagta caddaanka ah, shirkaduhu waxay si weyn u maalgelinayaan suuq-geynta si ay u dhisaan qiimaha astaanta iyo wacyigelinta.
Asal ahaan, waxay dadka xasuusinayaan waxa ay tahay in ay mar kale safraan.
Tan ugu muhiimsan, wakaaladaha safarka iyo hawl wadeenada dalxiisku waxay hagaajinayaan meelaha taabashada dhijitaalka ah si ay ugu fududaato joojinta iyo dib u qabsashada. Ururada hormuudka ah waxay ku sii jiraan safka hore iyada oo ay ugu mahadcelinayaan aaladaha dhijitaalka ah ee leh ikhtiyaarka "aan taabasho lahayn", sida tignoolajiyada lacag-bixinta mobilada.
Horumarinta iyo qaybinta tallaaladu waxay caawiyaan in fayraska la xakameeyo, laakiin xaddidaadaha qaarkood ayaa sii jiri doona. Sida saxda ah, waxaa jiri doona xaddidaadyo khuseeya dhaqdhaqaaqa gudaha iyo xuduudaha. Dalxiiska gudaha waxa uu fududeeyaa la qabsiga isbedelada. Dhanka kale dowladuhu waxay ku dadaalayaan soo celinta iyo dib u howlgelinta waaxda, iyagoo si isku mid ah u ilaalinaya shaqooyinka iyo ganacsiga. Sida aan arki karno, warshadaha dalxiisku waxay mar horeba ku socdeen isbeddel weyn, oo ay hogaaminayaan ballanqaadka weynaanta. Maaddaama shirkadaha ku jira warshadaha dalxiisku ay u heellan yihiin inay bilaabaan dakhli-abuuris, dawladaha hoose iyo gobolka ayaa dejinaya amarada. Si kastaba ha ahaatee, waa muhiim in aan la iska indha tirin deymaha suurtagalka ah.
Helitaanka iyo Joogteynta Daboolista Caymiska Ku Haboon Waa Qayb Muhiim ah oo ka mid ah Habka Maareynta Khatarta
Dhibaatooyinku waxay u muuqdaan inay dhacaan marka ugu yar ee la filayo, markaa wakaaladaha safarka iyo hawl-wadeennada dalxiisku waa inay qorshe adag u yeelo taas oo dejisa tillaabooyinka la qaadayo xaaladdan oo kale. Intaa waxaa dheer, waa lagama maarmaan in la galo caymis sababtoo ah waxay si wax ku ool ah u yaraynaysaa waxyeelada ka timaadda dhacdooyinka lama filaanka ah. Haddii ganacsiyada yaryar iyo shirkadaha da'da yar ay u muuqdaan inay yihiin kuwo caymis hooseeya, oo leh shirkado waaweyn, waa sheeko gebi ahaanba ka duwan. Caymisku waxa uu ka ilaaliyaa dhaqaalaha khasaaraha ay keenaan khataraha kala duwan. Waxay ku salaysan tahay heshiis qoran oo sharci ah, kaas oo ku qasbaya shirkadda caymiska inay daboosho qaddar u dhigma khasaaraha. Si fudud loo dhigo, khatarta maaliyadeed waxaa loo wareejiyaa dhinac saddexaad. Macaamiishu waxay bixiyaan qiimo dhimis ku salaysan arrimo kala duwan.
Meherad kasta oo salka ku haysa siinta la-talinta iyo adeegyada macaamiisha waxay u baahan tahay caymis si ay isaga difaacdo dacwadda waxa aanay xakamayn karin. Hawl-wadeennada dalxiisku uma baahna nooc kasta oo alaab caymis ah oo suuqa yaalla, xataa haddii ay awoodaan. Hal nooc oo caymis ah oo loo baahan yahay waa caymiska daynta guud ee ganacsiga. Waxay dabooshaa sheegashooyinka sida dhaawaca xayaysiiska, dhaawaca jirka iyo burburka hantida, iyo ku xadgudubka xuquuqda daabacaada. Milkiilayaasha ganacsigu waxay badbaadin karaan lacag kana fogaadaan kharashyada aan loo baahnayn haddii ay is barbar dhigaan heerarka caymiska iyo xigashooyinka. Waxaa jira shabakado gaar ah oo u oggolaanaya isticmaalaha ka raadi xigashooyinka warshadaha iyo nooca ganacsiga. In kasta oo aanu caymisku ka hor-istaagin in ay khaladaad dhacaan, haddana wax badan ayay fududeeyaan.
Ka sokow masuuliyada guud ee ganacsiga, noocyada siyaasadaha caymiska ee caadiga ah waxaa ka mid ah laakiin aan ku xaddidnayn xisaabaadka la qaadan karo iyo caymiska hantida. Halka kan hore uu tilmaamayo ilaalinta ganacsiga haddii ay dhacdo in aanay awoodin in ay lacag ka ururiyaan macaamiisha, kan dambe waxa uu bixiyaa lacag celin lacageed haddii qaab-dhismeedka iyo waxa ku jira la saameeyo, sida haddii ay dhacdo xatooyo ama dhaawac. Waxa xiiso leh oo ku filan, in qaar badan oo ka mid ah ay miciin bidaan inay iskood u caymiyaan hantida sida hantida. Tani waxay asal ahaan ka dhigan tahay in khatarta la hayo si ka duwan sidii loogu wareejin lahaa caymis. Go'aanku badanaa wuxuu ku salaysan yahay caymis la'aan, laakiin maaha farsamada maaraynta khatarta ku habboon.
Mararka qaarkood, waxaa laga yaabaa inay lagama maarmaan noqoto in la raadsado talo-yaqaanno si ay uga caawiso go'aaminta caymiska ugu habboon. Inkastoo aysan u muuqan, caymisku waa arrin adag, waxaana jira dhowr doorasho oo la tixgeliyo. Haddii ganacsigu aanu lahayn heerka saxda ah ee caymiska, waxa laga yaabaa inay la kulanto kharashyo culus ka dib sheegashada. Shirkado badan ayaa xittaa ku dhamaaday inay albaabada u xidhaan weligood. Dhibaatooyinku waxay ku dhici karaan qof kasta wakhti kasta. Xitaa xirfadlayaasha ugu fiican ma saadaalin karaan waxa dhici doona safarka. Haddii macmiilku aanu faraxsanayn, kama waaban doonaan inay dacwad keenaan.